Ebee ka esi nweta backlinks si infographics?
N'oge a, infographics na-enwetawanyewanye na nkwado. N'ezie, ihe oyiyi ndị a na-ekiri anya nke na-ebu ozi bara uru na-atụ anya na ọ ga-abụ na ndị na-agụ ihe dị ka okpukpu 30 karịa akwụkwọ "ederede". Ọ bụ ya mere ajụjụ - ebe ị ga-esi nweta backlinks si infographics - mee ka uche zuru oke. Ee, nke ahụ bụ eziokwu, infographics nwere ike ịpụta nnukwu utịp na azụmahịa online. Ihe niile ịchọrọ ile anya nke ọma bụ ịmepụta ihe bara uru nke data bara uru na ihe anya - ma anya nke ọma, na ịnye ozi na-akpali akpali ma na-akpali akpali banyere isiokwu kwesịrị ekwesị nye ndị na-ege ntị ziri ezi - dan cases a4 sfx v1. Kedu ihe ọzọ - inwe ihe ọmụma dị mma ma dị egwu nke na-eme ka ọdịnaya gị nabatara ịga gwọọ. N'ụzọ dị otú a, ezigbo infographics nwere ezigbo mmachi azụmazụ HQ nke na-emepụta ihe, n'otu oge ahụ meziwanye ebe nrụọrụ weebụ gị 'ma ọ bụ blog na ọganihu na SEO na ọnụ ọgụgụ. Ya mere, ebe iji nweta backlinks si infographics? Tupu m gosipụtara gị ndepụta nke isi mmalite ndị dị na nke ahụ, ka anyị jiri ụfọdụ nkọwa pụtara. Kedu ihe bụ ezigbo infographics? Ndị a bụ isi ihe atọ dị iche iche na-eme ọ bụla dị mma - imepụta ịtụnanya, nkwalite na mgbapụta, na nchọpụta nke ọma.
O doro anya na imewe ahụ bụ ihe mbụ site na ozi ọ bụla iji malite ịrụ ọrụ. Ihe niile ị ga - eji gaa na iji ihe ọmụma na - eme ka ha lee anya-na - adọrọ adọrọ ma na - emetụ ha aka.
Nkwalite na nbudata dị mkpa maka infographics dịka atụmatụ dị ịtụnanya na uru ha bara site na nchịkọta akụkọ nyochaa nke ọma. Nyere na enweghi ihe omuma ihe nke oma (i. e. , na nkwalite mgbasaozi kwesiri ekwesara na ntinye ozi site na email), ihe ozo ozo ga-abia ihe na-abaghi ​​uru, n'ezie.
Nchịkọta nke nyocha nke ọma pụtara na ezi ozi ọma ọ bụla ga-ebu ụfọdụ data bara uru, dịka nchịkọta mmasị, eziokwu ndị na-adịghị adị na isiokwu e nyere, nghọta mara mma nke ọma, ma ọ bụ ihe ọbụla dị ka akwụkwọ mpempe akwụkwọ ma ọ bụ eserese.
Na ebe a ka ị ga-esi nweta backlinks si infographics - n'okpuru ebe a bụ ndepụta nke usoro anọ nwere ike ịntanetị iji nyere gị aka site na ịmepụta nke mbụ gị:
Piktochart dị mfe ihe eji eme ihe iji mepụta akara ngosi HQ maka akwa backlinks dị elu. Mee ka ihe omuma gi obula ghari. Ihe niile ị chọrọ bụ itinye oge ụfọdụ n'ịmepụta ozi na-akpali akpali nke ga-asị na ị "na-anabata" ịkekọrịta. Atụmatụ free na Piktochart na-enye obere set nke ezi imewe ngwọta, ọ bụ ya mere ma ọ bụrụ na ị dị njikere na njikere ịrụ ọrụ ndị ọzọ na mma infographics - ị ga-mma tụlee na-akwụ ụgwọ ndenye si n'ebe ahụ.
Canva bụ isi ihe ọzọ dị mma nke nwere ike inyere gị aka iji ndebiri ihe ngosi ozi efu n'efu. Ma ha dị oke! Rite uru n'aka professionally gere infographics ka igbanye ọbụna azụlinks, edu, mbak, na ndị a.
Venngage Infographics bụ ihe kachasị ngwa ngwa na-emepụta ihe ọmụma nke i nwere ike iche n'echiche.Nwee ezigbo ihe ị na-ahọrọ otu n'ime ihe dịka narị ise narị ise na - echekwa ihe ndị ọkachamara-ọkachamara na ọtụtụ clicks.
Fiverr bụ nhọrọ ikpeazụ enyere maka ndị na-achọ ebe ị ga-esi nweta backlinks si infographics. Fiverr ga - abụrụ gị ngwọta kachasị mma, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ihe ngosi data gị - malite na ego 5 maka akwụkwọ ozi ọma dị elu maka karịsịa maka ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog gị.